Kacha mma Benoxacor, CAS 98730-04-2 Manufacturer and Factory | Na-achọ ihe
LAMBDA CYHALTHRIN ACID, KAS ...
Hydrazine hydrate, Ihe 7803 ...
Nhọrọ ogwu. Njikwa ahịhịa kwa afọ (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum, na Cyperus) na ụfọdụ ahịhịa buru ibu (Amaranthus, Capsella, Portulaca) na ọka, sorghum, okpete, soya agwa, obere ego, owu, sugar beet, fodder biiti, poteto, akwụkwọ nri dị iche iche, sunflowers, na pulse kụrụ.
Aha ndị ọzọ:
EINECS Mba 257-060-8
Ọcha: 96% TC 72% EC
Ngwa: Mgbutu ahihia
Ihe nlele: Availiable
Afọ 2 ~ 3
Njupụta: 1.1 g / cm3
Isi na-agbaze: 158 ℃
Ndepụta nke Mwepu: 1.593
nchekwa: 0-6 Celsius
Molekụla ibu: 283.7937
Igodo ọkụ ọkụ: 199.8 Celsius C
Isi mmiri: 406.8 Celsius C na 760 mmHg
Nhọrọ ogwu. Njikwa ahihia kwa afọ (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum, na Cyperus) na ụfọdụ ahịhịa buru ibu (Amaranthus, Capsella, Portulaca) na ọka, sorghum, okpete, soya agwa, obere ego, owu, shuga beet, fodder biiti, poteto, akwụkwọ nri dị iche iche, sunflowers, na pulse kụrụ. A na-ejikarị ya na ahịhịa ahịhịa sara mbara, na-agbatị ụdị ọrụ dị iche iche.
Na sel nkwusioru nke ọka (ndị mays) na 14C-benoxacor, a na-eme ka benoxacor gbasaa ngwa ngwa ka ọ nwee ike ịchọpụta metabolites isii n'ime 0.5 h. A na-achọpụta metabolites iri na abụọ na extracts site na sel ndị a gwọrọ maka 24 h. N'ime mmadụ atọ kachasị nwee metabolites dị ugbu a, metabolites abụọ bụ catabolic formylcarboxamide na carboxycarboxamide derivatives nke benoxacor. Onye nke ato bu mono glutathione conjugate nke benoxacor. Mkpụrụ metabolite a nwere otu molekul glutathione jikọtara site na otu cysteinyl sulfhydryl na N-dichloroacetyl a- carbon nke benoxacor. Achọpụtara ihe nrụpụta catabolic a-hydroxyacetamide yana amino acid conjugates ma ọ bụ nwere mkpokọta glutathione ma ọ bụ nke nwere ike ị nweta site na nri ọka. Achọpụtara disjcharide conjugate dị ka S- (O-diglycoside) glutathione conjugate.
240 Celsius C (ike ike atụmatụ)
1.3416 (atụmatụ siri ike)
> 107 Celsius
1.20 ± 0.40 (Eburu amụma)
Ntụle data CAS
98730-04-2 (Ntughari data Data CAS)
NIST Chemistry Ntughari aka
Sistemụ ndekọ ihe EPA
Nkwupụta Egwu na Nchedo
Akara (GHS) GHS07
Okwu mgbama Dọ aka na ntị
Nkwupụta ihe egwu H332
Usoro HS 29349990
Mgbu egbu LD50 (mg / kg):> 5000 ọnụ na oke; > 2010 dermally na oke bekee; LC50 na oke (mg / l):> 2000 site na inhalation (Fed. Regist.)
Nke gara aga: LAMBDA CYHALTHRIN ACID, CAS 72748-35-7
Osote: Niclosamide, CAS 50-65-7
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị
3,3-DIMETHYL-4-AKW PKWỌ ACID, CAS 63721-05-1